Maqaal: Gudomiyaha Gobolka Banadir Ma fudud yahay mise wax kalaa jira??? – Balcad.com Teyteyleey
Maqaal: Gudomiyaha Gobolka Banadir Ma fudud yahay mise wax kalaa jira???
Amaan iyo Boogaadin ayee mudan yihiin Dhalinyarada Ganacsatada ee hirgiliyay Beerta Nabadda.
Waxaan ii muuqato in Gudomiyaha cusub ee loo magacaabay G.Baanaadir uu rabo in si fudud iyo amaan raadis ku maamulo Magaalada Muqdisho asagoo aan ka fiirsan dhibaatooyinka ka dhalan karaan go’aamada aan si fiicaan looso darsin.
Gudoomiyaha waa nin sida aan qiyaasaayo aan ku fogeen aqoon ahaan iyo qibrad ahaan Maamulka Magaalo Weyn sida Muqdisho oo ay u sii dheertahay in ay tahay Caasimadda Soomaaliya.
Waa Magaalo Weyn mushaakilaad badan leh, maamuladii ay soo martayna kala kulantay cadaala darro, eex iyo boob hanti Qaran iyo mid Shaqsiyeed.
Waxaan rabaa in aan hoos xariiqo kolaytaba Soomaaliyoo idil ayaa ka warqabto, laga soo bilaabo MW Sheekh Shariif, Xasan Sheekh ilaa kan hadda jooga Maxamed Cabdilaahi ay u soo magacaabaan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir shaqsi u adeego danaha isaga u gaarka ah, ama hadaan si kale u iraahdo Dameer uu sidoo rabo u rarto.
Gudoomiya kasta uu MW soo magacaabo maaha in aan ka filano in uu hor’umar ku soo kordhiyo Magaalada, in uu la dagaalamo Musuqa madaama isaga Musuq ku yimid kuna amarsan in uu Musuq ku shaqayo, ka filan mayno in uu shacabka Reer Banadir dhax dhigo nidaam gaarsiin karo hor’umar kana saari karo saboolnimada ay ku nool yihiin, dhalinyaradana uu u shaqo abuuri karo.
Wareegtada uu soo saaray Gudoomiyaha G.Banaadir waxay iila muuqataa mid uusan ka fiirsan ama mid aan sharciga waafaqsaneen ama mid uusan darsin sida dhabta ah xaalada iyo qaabka lagu siiyay iyo mas’uuliyiinta u fasaxday in dhaliyaradaan ganacsatada ah ay gacanta ku dhigaan Beerta Nabadda, dib u habeen iyo quruxayn ku sameeyaan, shacabka Muqdishana ay faa’iidestaan.
Dhalinyaradaan ganacsatada ah amaan iyo boogaadin ayee mudanyihiin iyo in lagu dhiiri geliyo in ay ka howl galaan jardiinooyinkii hore ee Dowladii lahayd iyo in ay soo indha indheeyaan meelaha Caasimadda ku haboon in LAGA HIRGILIYO jardiinooyin baaxada weyn.
Gudoomiyaha G.Banaadir intoo isku mashquulin lahaa oo hor istaagi lahaa waxaa ka qurux badneed in uu dhalinyaradaan miis la fariisto oo ay wada xaajoodaan oo la gaaro qayma dhimis lagu galo Beerta Nabadda.
Midda kale aan Gudoomiyaha kula talinayo ha u howl galo sidii uu gacanta Maamulka ugu soo celin lahaa skuulaadkii iyo isbitaaladii iyo inuu shacabka u keeno adeeg bulshadeed oo ay ku qanci karaan.
Waad Mahadsantihiin ayaan idiin leeyahay.
Gudoomiyaha Xisbiga Banaadir.
The post Maqaal: Gudomiyaha Gobolka Banadir Ma fudud yahay mise wax kalaa jira??? appeared first on Ilwareed Online.
Ardayda Muslimiinta Shiinaha oo laga tarxiilayo dalka Masar